Izindaba - Ukuqhathaniswa kokusebenza phakathi kwe-servo motor ne-stepper motor
Ukuqhathaniswa kokusebenza phakathi kwe-servo motor ne-stepper motor
Njengohlelo lokulawula ukuvuleka okuvulekile, imoto ehamba kancane inobudlelwano obubalulekile nobuchwepheshe besimanje bolawulo lwedijithali. Kuhlelo lwamanje lokulawulwa kwedijithali lwasekhaya, i-stepper motor isetshenziswa kabanzi. Ngokubonakala kohlelo oluphelele lwe-digital AC servo, i-AC servo motor isetshenziswa kakhulu ohlelweni lokulawula ledijithali. Ukuze ujwayele inkambiso yokuthuthuka kokulawulwa kwedijithali, iningi lezinhlelo zokulawula ukunyakaza zisebenzisa i-stepper motor noma i-digital AC servo motor ephelele njengemoto ephezulu. Yize zifana nemodi yokulawula (isitimela se-pulse kanye nesiginali yokuqondisa), zihluke kakhulu ekusebenzeni nasekusebenziseni. Ukusebenza kwalaba ababili kuqhathaniswa.
Okokuqala, ukunemba kokulawula okuhlukile
I-Angle enyathela izigaba ezimbili ze-hybrid steping motor imvamisa ingu-1.8 ° no-0.9 °, kanti i-engela enyukayo yesigaba esiyisihlanu se-hybrid steping motor ngokuvamile ingu-0.72 ° no-0.36 °. Kukhona futhi amanye ama-stepper motors asebenza ngokweqile ngokuhlukanisa i-Angle yesinyathelo sangemuva ukuze sibe sincane. Isibonelo, i-Angle yesinyathelo semoto enezinyathelo ezimbili ze-hybride ekhiqizwa yi-NEWKYE ingasethwa ku-1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 ° no-0.036 ° ngokushintshwa kwekhodi yokudayela, okuthi iyahambisana ne-Angle yesinyathelo semoto yezigaba ezi-hybrid ezihamba izigaba ezimbili nezinhlanu.
Ukunemba kokulawula kwe-ac servo motor kuqinisekiswe yisifaki khodi sokujikeleza ekugcineni kwangemuva kwe-shaft yemoto. Ukuthatha i-NEWKYE digital digital servo motor njengesibonelo, ngemoto ene-encoder ejwayelekile engu-2500, okulingana ne-pulse kungu-360 ° / 8000 = 0.045 ° ngenxa yokusetshenziswa kobuchwepheshe bemvamisa obuphindiwe ngaphakathi komshayeli. Kwezimoto ezine-encoder eyi-17-bit, umshayeli uthola ama-pulse motors ayi-131072 ngejika elilodwa, okusho ukuthi, ukushaya kwayo okulingana no-360 ° / 131072 = 0.0027466 °, okuyi-1/655 ye-pulse elingana nemoto yokunyathela nge-motor i-engela yesinyathelo esingu-1.8 °.
Okwesibili, izici zemvamisa ephansi zihlukile
Ngejubane eliphansi, i-stepper motor ithambekele ekudlidlizeni kwemvamisa ephansi. Imvamisa yokudlidliza ihlobene nesimo sokulayisha nokusebenza komshayeli. Imvamisa kubhekwa ukuthi imvamisa yokudlidliza iyingxenye yemvamisa yokususa umthwalo engathathi umthwalo. Isimo sokudlidliza kwemvamisa ephansi esinqunywe yisimiso sokusebenza se-stepper motor asisihle neze ekusebenzeni okujwayelekile komshini. Lapho i-stepper motor isebenza ngejubane eliphansi, ubuchwepheshe be-damping kufanele busetshenziselwe ukunqoba into yokudlidliza kwemvamisa ephansi, njengokufaka i-damper emotweni, noma umshayeli ekusetshenzisweni kobuchwepheshe bokuhlukaniswa.
I-AC servo motor isebenza ngokushelela kakhulu futhi ayidlidlizeli ngisho nangesivinini esiphansi. Uhlelo lwe-Ac servo olunomsebenzi wokucindezela umsindo, lungafaka ukungabi bikho kobulukhuni bokusebenza, futhi uhlelo lunomsebenzi wokuhlaziya imvamisa (FFT), lungathola iphuzu lokudlidliza, okulula ukulungisa uhlelo.
Okwesithathu, isici semvamisa yesikhashana sihlukile
I-torque yokukhipha ye-stepper motor iyancipha ngokwanda kwejubane, futhi izokwehla kakhulu ngejubane eliphakeme, ngakho-ke ijubane layo eliphezulu lokusebenza livame ukuba yi-300 ~ 600RPM. I-Ac servo motor ingukukhishwa kwe-torque njalo, okungukuthi, ingakhipha i-torque elinganisiwe ngaphakathi kwejubane layo elilinganisiwe (imvamisa i-2000RPM noma i-3000RPM), kanye namandla okukhipha amandla angaphezu kwesivinini esilinganisiwe.
Okwesine, umthamo we-overload uhlukile
I-Stepper motor ngokuvamile ayinamandla okulayisha ngokweqile. Imoto ye-Ac servo inamandla amakhulu okugcwala ngokweqile. Ukuthatha uhlelo lwe-Sanyo AC servo njengesibonelo, inamandla okugcwala ngokweqile kwejubane nokugcwala kwe-torque. I-torque ephezulu izikhathi ezimbili kuya kwezintathu ze-torque elinganisiwe futhi ingasetshenziselwa ukunqoba i-torque engaphakathi komthwalo ongangenawo ekuqaleni. Ngoba imoto yokunyathela ayinawo amandla wokulayisha ngokweqile, ukuze kunqotshwe lesi sikhathi se-inertia ekukhetheni, kuyadingeka kaningi ukukhetha imoto nge-torque enkulu, futhi umshini awudingi i-torque enkulu kangaka ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile, ngakho-ke kwenzeka udoti we-torque.
Okwesihlanu, Ukusebenza okuhlukile kokusebenza
I-stepper motor ilawulwa yi-open-loop control. Uma imvamisa yokuqala iphezulu kakhulu noma umthwalo mkhulu kakhulu, kulula ukulahlekelwa isinyathelo noma itafula; uma isivinini siphezulu kakhulu, kulula ukusidlula ngokweqile lapho umisa. Ngakho-ke, ukuze kuqinisekiswe ukunemba kokulawula, inkinga yokwenyuka kwejubane nokuwa kwejubane kufanele isingathwe kahle. Uhlelo lwe-Ac servo drive luyi-loop-control control. Umshayeli angakwazi ukusampula ngqo amasiginali wempendulo ye-motor encoder. Ingxenye yangaphakathi iqukethe indandatho yesikhundla nendandatho yejubane.
Okwesithupha, ukusebenza kwejubane kwehlukile
Kuthatha ama-millisecond angama-200 ~ 400 ngemoto ehamba kancane ukusheshisa ukusuka ekuphumuleni kuye esivinini sokusebenza (imvamisa amakhulu ezinguquko ngomzuzu). Ukusebenza kokusheshisa kohlelo lwe-AC servo kuhle. Ukuthatha i-NEWKYE 400W AC servo motor njengesibonelo, kuthatha ama-millisecond ambalwa ukusheshisa ukusuka ekuphumuleni kuye esivinini sayo esilinganisiwe se-3000RPM, esingasetshenziswa ezikhathini zokulawula ezidinga ukuqala nokuma okusheshayo.
Ukufingqa, uhlelo lwe-AC servo luphakeme kune-stepper motor ezicini eziningi zokusebenza. Kodwa-ke, i-stepper motor ivame ukusetshenziselwa ukwenza imoto ngezikhathi ezithile ezingabizi kakhulu. Ngakho-ke, kunqubo yokwakhiwa kohlelo lokulawula ukubheka izidingo zokulawula, izindleko nezinye izinto, khetha imoto efanelekile yokulawula.
IHybrid Stepper Motor, 220 Volt Ac Servo Motor, IServo Motor Actuator, Izintambo ezihamba nge-Wire ze-6, I-Ac Stepper Motor, Kuvaliwe I-Loop Stepper Motor Driver,